Mandripaka ny alan’Amazonia ny afo hatramin’izao. Hatry ny omaly, miaramila manodidina ny 43000 no nahetsika, hanafaingana ny fandevonana ny afo.
Raha isaky ny faran’ny taom-pahavaratra, isan-taona, no misy fahamaizana mitranga toy izao ao Brésil, niavaka tsy toy ny isan-taona ity indray mitoraka ity. Ny fiatombohan’ny volana jolay 2019 teo no efa nirehitra ny alan’i Amazonie, ary mbola tsy lefy hatramin’izao. Raha ny tombatombana avy amin’ny INPE na vondrona nasionaly misahana ny fikarohana an’habakabaka, ala manodidina ny 79 513 no efa ringana, hatramin’ny fiatombohan’ity taona 2019 ity, ary ny atsasamanilan’izay dia avy ao Amazonie avokoa. Ala manodidina ny 3000 isa no efa may, nanomboka ny zoma 23 Aogositra katramin’ny androany 26 Aogositra.
Niavaka tsy toy ny nahazatra isan-taona ny matso lehibe natao tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina nanamarihana ny faha 59 taona ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Hipoka tanteraka i Mahamasina. Natosiky ny fitiavan-tanindrazana ny Malagasy, efa manomboka latsaka anatin’ny Malagasy ny fanamarihana ny fetin’ny fahaleovantena raha noharina tamin’ireo taona maro lasa.